Fiaraha-miasan’ny CNaPS sy ny FJKM Mpiasa 435 nofanina tao Vohidiala
Mpiasa miisa 435 avy amin’ireo synodam-paritany FJKM (Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara) Ambatondrazaka Vaovao sy Alaotra Kraoma no nanaraka fiofanana momba ny fiahiana ara-tsosialy, ny talata 13 sy alarobia 14 novambra lasa teo.
Notanterahina tao amin’ny Fitandremana FJKM Vohidiala Finoana izany, izay natrehan’ireo mpiasa avy amin’nysekoly, hopitaly, toby fitaizana zaza kamboty ary solontena avy amin’ny biraom-panjakana isan-karazany. Fanatanterahana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny CNaPS sy ny FJKM, voasonia ny volana jona 2017 ny atrikasa. Andiany faha-27 izy ity ary synodam-paritany miisa 37 no efa voakasika hatreto. Atoa Rasoanaivo Didier, Talen’ny Fenitra sy ny Fikarohana eo anivon’ny CNaPS foibe no nitarika ny delegasiona tany Vohidiala. Nanampy tamin’ny fanatontosana ny fiofanana kosa Rajaonarivo Andriatsimilavo, Delegen’ny talen’ny masoivoho ao Ambatondrazaka. “ Tsy tokony hisy mpiasa eo anivon’ny Fiangonana ka tsy hisitraka ny zony. Fotoana izao hamahana ny olan’ny lasa”, araka ny nambaran’Atoa Rasoanaivo Didier. Noresahana nandritra ny tapany voalohany tamin’ny fiofanana ny momba ny zon’ny mpiasa sy ny andraikitry ny mpampiasa mba hahatanteraka ny fiahiana ara-tsosialy. Nampahafantarina ireo mpiofana ihany koa ny andraikitry ny Tahirim-pirenena mikasika ny fampanjariana ny zon’ny mpiasa, ireo tolotra maro atolony, indrindra ireo fomba fiasa eo anivon’ny CNaPS. Niara-nanaiky ireo mpandray anjara nandritra ity 2 andron’ny fiofanana ity fa nahazo fahalalana maro momba ny fiahiana ara-tsosialy.